Electronics Industry - Luoyang yakabva yanyatsobatana Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
Ndokugadzira TUNGSTEN MOLYBDENUM
MOLYBDENUM MHANGURA chiwanikwa
MOLYBDENUM Kukuru Mukutonga kwechiFascist
MOLYBDENUM Nokuboora MANDREL
MUKURU Density TUNGSTEN chiwanikwa
TUNGSTEN CARBIDE chiwanikwa
TUNGSTEN Kukuru Mukutonga kwechiFascist
Excellent chafariz conductivity, inodzorwa coefficient pamusoro chafariz kuwedzera uye hunoshamisa zvinhu kwomwoyo. Zvakakwana pachena: zvigadzirwa kwedu zvemagetsi indasitiri vane chinokosha chaizvo zvinooneka ehupfumi. Kushandiswa sezvo hwaro ndiro uye kupisa spreaders, ivo nechokwadi rakavimbika magetsi.
Pakutanga, chokwadi kuti magetsi zvinoriumba chipise asingadi sokuti chinhu kunetseka pamusoro. Mazuvano, anoita chero wechikoro anogona kukuudza kuti zvikamu kombiyuta vadziyirwe zvichinzi anobatidzwa. Nepo mudziyo uri kushanda, munhu inorwara ari kusvitsa zvemagetsi simba akarasika sezvo kupisa. Asi ngatirege kunyatsotarisisa: The kuchinjwa Kupisa zvinogona kutsanangurwa se kupisa nekubudisa chete chikwata (pamusoro) nharaunda (kupisa nekubudisa arambe achirema). Sezvo mienzaniso iri girafu Kuenzanisira, kupisa kokuyerera arambe achirema vakawanda zvemagetsi zvinoriumba kunogona zvakanyanyisa. Sokukwirira ari chitundumuseremusere kamwene huro umo tembiricha yakakwirira sezvo 2 800 ° C angamuka.
The coefficient pamusoro chafariz kuwedzera chimwe chinhu chakaoma kuti semiconductors zvose. Kana semiconductor nechigadziko hwendefa zvinhu chokuwedzera uye chibvumirano pamwero yakasiyana kana vachibatwa kuchinja tembiricha ipapo zvemaziso kunetseka muka. Izvi zvinogona kukuvadza semiconductor kana kanganisa kubatana pakati chip and kupisa spreader. Zvisinei, pamwe zvinhu zvedu, imi munoziva imi muri muna njodzi maoko. zvinhu zvedu vane optimum coefficient kuti chafariz kuwedzera zvokubatanidza semiconductors uye Ceramics.
Sezvo semiconductor chawo ndiro Somuenzaniso, zvinhu zvedu zvinoshandiswa mhepo turbines, zvitima uye maindasitiri mafomu. In simba semiconductor modules kuti inverters (thyristors) uye simba diodes, vatambe yakaoma basa. Sei? Nemhaka zvavo optimum coefficient pamusoro chafariz kuwedzera uye kwazvo chafariz conductivity, semiconductor nechigadziko ndiro zvinoumba simba muzinda nokuti anenge nesilicon semiconductor uye nechokwadi upenyu module basa anopfuura 30 apfuura.
Heat spreaders nehwaro ndiro yaigadzirwa molybdenum, tungsten, MoCu, WCu, cú-MoCu uye cú-MoCu-Cũ laminates yakavimbika kupera kupisa zvakapararira munzvimbo magetsi zvinoriumba. Izvi zvose kunodzivisa ari overheating kuti magetsi mano uye anowedzera chigadzirwa yokurarama. kupisa yedu spreaders kubatsira kuchengetedza akadzikama mamiriro Somuenzaniso, muna IGBT modules, RF Mabhokisi kana akatungamirira Chips. We zvakagadzira MoCu nezvakawanda zvokunyama rinokosha chaizvo mutakuri mahwendefa akatungamirira Chips. Izvi ane coefficient pamusoro chafariz kuwedzera akafanana sesafaya uye Ceramics.
We kugovera zvinhu zvedu nokuda zvemagetsi indasitiri siyana coatings. Inokuchengetedza zvinhu pamusoro ngura uye uvandudze solder richibatanidza semiconductor uye pfuma yedu.
Tzm Plate, Molybdenum, Molybdenum Plate, Tzm Sheet, Molybdenum Rod, Molybdenum Sheet,